Nhau - Iyo Kuvandudza kweNail Art
Carbide Chipikiri Drill Bits
Ceramic Chipikiri Drill Bits
Diamond Chipikiri Drill Bits
Chipikiri Drill Bit Sets
Quartz Naill Drill mabheti
Silicone Chipikiri Drill Bits
Chipikiri Drill Machine
Iko Kuvandudza kweNail Art
Nemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa dzinobuda, kudiwa kwekuchengetwa kwembambo kwanga kusiri kwakakurumbira. Asi nekuda kwekumira kwedenda, apo dzimwe nzira dzekushandisa dzakarambidzwa, isu takangoerekana taziva kuti hunyanzvi hwembambo hwave hwakabatikana zvakanyanya muhupenyu hwedu.
Dhata inoratidza kuti nepo zvizoro zvemavara, zvinonhuwira uye miromo yemuromo yakaona kudiwa-kwenguva pfupi kudzvinyirirwa nekuda kwedenda, chipolishi chechipikiri chakaona kukura kwekupokana, nekutengesa kusvika 179% gore-ne-gore.
Iko kuvandudzwa kwembambo
Iyo yekutanga nhoroondo yakanyorwa nezve zvipikiri art iri munguva yekare yeEjipitori. Vanhu vaishandisa zvicherwa, zvipembenene nemabriji sezvinhu zvekushongedza zvipikiri zvavo. Rudzi rwe henna iyo yaigona kudhaya zvipikiri zveruvara rwakatsvuka yakawanawo zita rekuti henna.
MuChina, ichi chiratidzo chemasimba chakatanga muShang Dynasty muna 1600 BC. Yin vatengesi vanokudzwa vakasanganisa chingamu chiArabic, gelatin, wakisi uye zai chena pamwechete ndokuzvizora pazvipikiri zvavo, vachizopedzisira vazvipenda iwo wakadzika mutsvuku kana ebony ruvara.
Iyo fashoni yekupenda kwembambo yaive yatovepo muTang Dynasty. Panguva iyoyo, chinhu chikuru chakashandiswa chaive maruva eFenghuang. Mushure mekupwanya maruva uye nekuwedzera alum, yakatetepa siriki mvere yakanyikwa uye yakadhayiwa pamusoro pezvipikiri, uye mushure mekuverengeka kwakawanda, yaizogara kwemwedzi.
Yemazuva ano chipikiri art inotanga munguva yekupedzisira yeVictorian. Panguva iyoyo, hunyanzvi hwembambo hwaiitwa nenzira yechinyakare yekumwaya pendi. Sezvo zvakatora mazuva mazhinji kuti pendi yemota iome, zvakatora zuva rose kuti maoko maviri aome.
Kwaingova nekukura kweiyo tekinoroji yekupenda mota muma1920s apo chipikiri chechipikiri chakatsemuka kubva kune monopoly yevakuru uye zvishoma nezvishoma chakava chakajairika. Pasi pesimba rerunako rwevatambi vemuHollywood, pfungwa yekuti "maoko chiso chechipiri chemukadzi" yakatanga kubata.
Magazini evakadzi abuda, vachikurukura machengeterwo ezvipikiri zvavo nekuvanza mabasa avo chaiwo. Vakadzi vanga vachipinda mumasalon salons uye vachipinda nemaoko akasindimara anoita kunge vakatsika bhinzi nemaoko asina maoko uye vachibuda zvinyoro nyoro uye zvakapfava uye zvakanakisa.
Iyo YaQin Sanding Bhendi inoshandiswa kubvisa chipikiri chechipikiri. Kwete chete isu tinoshandisa yakanakisa epamba mbishi zvinhu zveiyo brown sanding bhendi, asi zvakare tinoshandisa zvakaunzwa zvigadzirwa kubva kuJapan kune vatema uye chena sanding bhendi uye USA Norton yeiyo green sanding bhendi. Chimiro chayo chakafanana nechubhu yakatenderera, uye chikamu chepakati chakakomberedzwa. Musimboti wayo wepakati une ruvara rwepepuru, isina glue reindasitiri, uchishandisa tekinoroji yekubatanidza tekinoroji. Resin-yakasungwa sanding bhendi inoona kuti chigadzirwa hachisi chepfu uye eco-inoshamwaridzika. Iyo glue inogoverwa zvakaenzana. Hapana rimwe glue rakadururwa. Hapana kuvhurwa. Iyo yakatemwa inotsvedzerera uye haina burrs. Zviri nyore kupolisha micheto yezvipikiri uye nyore kubata pamusoro penzvimbo yenzara.
Zvimiro zveYaQin Sanding Band
1. Yakakwira mhando Yakatumirwa hasha jira zvinhu kubva kuU.SA.High kukuya kushanda uye kupfeka-chiratidzo.
2. Kugadzikana kwepamusoro uye hakuna kuvhara.
3. Saizi yepasirese, kurodha zviri nyore uye kudzikisa.
4. Kukanganisa mwero wakaderera pane 1 ％.
5.Recommended kuitira kuraswa kushandiswa.
Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezve sanding bhendi mutengo,ndapota taura nesu.
Post nguva: Jul-31-2021
Wuxi Yaqin Zvekutengesa Uye Kutengesa Co, Ltd.
NO.25 Fengxiang North Road, Liangxi District, Wuxi Guta, Jiangsu Province, China.
© Copyright - 2020-2020: All Rights Reserved.